Apple dia namoaka fitsangatsanganana misy torolàlana miaraka amin'ny vaovaon'ny iPhone 13 | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka fitsangatsanganana misy torolàlana miaraka amin'ny vaovaon'ny iPhone 13 vaovao
Angel Gonzalez | 18/09/2021 13:16 | iPhone 13, About us
Nanomboka ny famandrihana ny iPhone 13 vaovao omaly ary amin'ny 24 septambra dia manomboka tonga amin'ny tompony avy ireo singa voalohany. Apple dia nisafidy finday finday vaovao ampiasain'ny puce A15 Bionic vaovao sy fakan-tsary nohavaozina afaka mandrakitra horonantsary ao amin'ny ProRes ary koa mandrakitra sary tifitra maranitra amin'ny alàlan'ny fanovana ireo malaso miaraka amin'ny maody Sinema. Na dia nohazavaina tsara sy novolavolaina tamin'ny tranokala ofisialy aza ny vaovao rehetra, Apple dia namoaka horonantsary vaovao amin'ny endrika fitsangatsanganana misy torolàlana izay manasongadina ny zava-baovao ao amin'ny iPhone 13.
Ny zava-baovao ateraky ny iPhone 13 dia hita ao amin'ny fitsidihan'ny Apple
Ny sary iray dia sarina teny arivo ary fantatr'i Apple am-po izany. Izany no antony namoahanao a Fitsidihana an-dalambe mba hanasongadinana izay vaovao ao amin'ny iPhone 13 sy iPhone 13 Pro amin'ny maodeliny rehetra. Mandritra ny horonantsary dia ahitantsika ny fomba fampidirana ireo toetra ara-teknikan'ireo fitaovana hihetsika. Azonao atao ny mahita ny maody Sinema amin'ny hetsika, ohatra izay hametrahana ny fanoherana ny iPhone 13 hosedraina na ohatra amin'ny fiasan'ny fakantsary vaovao.
iPhone 13 sy iPhone 13 Mini, lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra
Raha ny marina, ny fitsangantsanganana dia mizara ho fampahafantarana ireo pitsopitsony teknika an'ireo maodely efatra misy. Manaraka izany, tohizanay ny fampisehoana ny fiasan'ny maody Sinema ary hijerena ny hamafin'ny fitaovana sy ny fanoherana ny ranoka. Aorian'izay dia asongadino ny efijery Super Retina XDR vaovao ary hamakafaka ny fizakantenan'ny bateria. Ary farany, miditra amin'ny fizarana sary izay mampiavaka ny fomban'ny sary, ny zoom zoom ary ny maody Macro an'ny iPhone 13 Pro ianao.
Ity dia fomba mahaliana iray avy amin'i Apple hampanakaiky kokoa ny mpampiasa iPhone 13 amin'ny alàlan'ny horonantsary azo ampiharina sy voatarika ahafahan'ny mpampiasa sy ny mpiasa ao amin'ny Big Apple hita mitarika ny asany. Azo inoana fa amin'ny fitaovana ho avy dia hahita zavatra mitovy amin'izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Apple dia namoaka fitsangatsanganana misy torolàlana miaraka amin'ny vaovaon'ny iPhone 13 vaovao
Ny chip vaovao A15 Bionic ao amin'ny mini iPad dia voafetra amin'ny heriny
Mandray ireo widgets ny overcast ary manampy fampiasa vaovao ho an'ny CarPlay